यसरी भईन् निकिता मिस नेपाल - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
यसरी भईन् निकिता मिस नेपाल
गत शुक्रवार राति १० बजेको हाराहारीमा मिस नेपाल–२०१७ का मुख्य निर्णायक डा. चिरञ्जीवी नेपालले अन्तिम चरणमा पुगेका सात जना प्रतिस्पर्धीलाई एउटा सामूहिक प्रश्न सोधे । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालबाट आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नको अपेक्षा गरिएको थियो, अपेक्षा गरिएझैं उनले सोधे– ‘तपाईंको विचारमा एउटी नारीले देशको आर्थिक विकासमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छिन् ?’
त्यसअघि उद्घोषकद्वय शुभेच्छा खड्का तथा सञ्जय गुप्ताले प्रतियोगिताको अन्तिम चरणका लागि रोजिना श्रेष्ठ, रक्षा कार्की, सहारा बस्नेत, नीति शाह, मञ्जरी सिंह, रोजिना श्रेष्ठ तथा निकिता चाण्डकलाई स्टेजमा बोलाइसकेका थिए । प्रमुख निर्णायकले प्रश्न सोध्नुअघि नै उद्घोषकले विगतका प्रतियोगिताभन्दा फरक नियमका बारेमा जानकारी गराए । एक जनाबाहेक बाँकी ६ जना प्रतिस्पर्धीको कानमा बाहिरको आवाज सुन्न नसकिने एयरफोन लगाइयो । सबैभन्दा पहिले प्रतिस्पर्धी नम्बर ७ रोजिना श्रेष्ठले मात्र प्रश्न सुनिन् । त्यसपछि पालैपालो एक–एक गर्दै सबैले उक्त प्रश्नको जवाफ दिए । निर्णायकहरूले उनीहरूको जवाफका आधारमा विजेताको घोषणा गरे ।
विजेताको घोषणा गर्नुअघि सबै १९ जना प्रतिस्पर्धी स्टेजमा आए अनि पालैपालो ११ वटा शीर्षकमा उपाधि प्रदान गरियो । त्यसपछि अन्तिम चरणमा पुगेका सात जना प्रतिस्पर्धी हातेमालो गर्दै अघिल्लो पंक्तिमा उभिए । त्यसपछि प्रारम्भ भयो अन्तिम चार उपाधिको घोषणा । सबैभन्दा पहिले मिस नेपाल एसिया प्यासिफिक इन्टनरनेसनलको उपाधिको घोषणा गरियो । आयोजक हिडन ट्ेरजरले यसै वर्षदेखि यो चौथो एवार्डको व्यवस्था गरेको हो, जसको विजेताले मिस एसिया प्यासिफिकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् । धोविघाट, ललितपुरकी साहारा बस्नेतले उक्त उपाधि जितिन् । २३ वर्षीया साहारा ५ फिट ५ ईन्च अग्ली छिन् । यसअघि उनी सन् २०११ मा सम्पन्न मिस ग्लोबल प्रतियोगिताको उत्कृष्ट ५ सम्म पुग्न सफल भएकी थिइन् । बस्नेत बास्केटबल खेलाडी समेत हुन् ।
अर्को उपाधि थियो, मिस नेपाल इन्टनरनेसनलको । प्रतिस्पर्धी नम्बर ११ नीति शाहलाई उक्त उपाधिको विजेता घोषणा गरियो । उक्त एवार्डका लागि नीतिको नाम घोषणा हुँदा दर्शकदीर्घामा एक प्रकारको शून्यता छायो । परिचयात्मक चरणदेखि नै दर्शकको राम्रो साथ पाइरहेकी नीतिलाई अधिकांशले मिस नेपालकै विजेताका रूपमा हेरेका थिए । यद्यपि निर्णायक चरणको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनी केही हडबडाएकी थिइन् । दाङको प्रतिनिधित्व गर्दै मिस नेपालमा सहभागी भएकी नीति स्थापित मोडल पनि हुन् । ५ फिट ५ इन्च अग्ली नीतिले आगामी नोभेम्बर महिनामा जापानमा हुने मिस इन्टरनेसनलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् ।
प्रतियोगितामा मिस नेपाल अर्थको उपाधि रोजिना श्रेष्ठले जितिन् । मित्रपार्क काठमाडौंकी २३ वर्षीया श्रेष्ठले आईटी तथा म्यानेजमेन्टमा स्नातक गरेकी छिन् । यो उपाधिसँगै रोजिनाले आयोजक राष्ट्र तय हुन बाँकी रहेको मिस अर्थ–२०१६ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् ।
सात जनामध्ये तीन जनाले तीन मुख्य उपाधि जितेपछि उद्घोषकले प्रतियोगिताकै मुख्य उपाधि मिस वल्र्ड नेपाल–२०१७ को घोषणा गर्नुअघि केही समय कौतूलहता पैदा गरे । निर्णायक चरणमा सबैभन्दा रोचक तथा आकर्षक जवाफ दिएर २० वर्षीया निकिता चाण्डकले यसअघि नै निर्णायकसहित दर्शकहरूलाई समेत प्रभावित तुल्याइसकेकी थिइन् । सात फाइलिस्टमध्ये सबैभन्दा अन्तिममा जवाफ दिने पालो पाएकी निकिताले जवाफ दिने क्रममा आकर्षक आत्मविश्वास झल्काएकी थिइन् । निकिताले समाजसेवी अनुराधा कोइरालासहित विभिन्न सक्षम एवं प्रतिभाशाली महिलाको उदाहरण दिँदै अर्थतन्त्रमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएकी थिइन् । निकिताले कुल जनसंख्यामध्ये ५१ प्रतिशत रहेका महिला शिक्षित तथा आर्थिक रूपले सबल हुन सके देशको विकास हुन समय नलाग्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् । आफ्नो जवाफको अन्त्यमा निकिताले भनेकी थिइन्– ‘मुलुकको विकासमा महिला र पुरुष दुवैको उत्तिकै भूमिका अनिवार्य हुन्छ ।’
उर्लावारी, मोरङकी निकिता चाण्डक प्रतिस्पर्धी नम्बर १४ का रूपमा प्रतियोगितामा सहभागि भएकी थिइन् । ५ फिट ६ इन्च अग्ली निकिता भारतको नोएडामा व्यवस्थापनमा स्नातक तह पहिलो वर्षमा अध्ययनरत छिन् । नृत्य, गीत तथा मोडलिङमा रुचि राख्ने निकिता समाजसेवामा पनि उत्तिकै रुचि राख्छिन् । उनले भविष्यमा अभिनेत्री बन्ने लक्ष्य लिएकी छिन् ।
अघिल्ला वर्षका मिस नेपालको क्राउनिङ सेसन केही भावुक हुन्थ्यो । मुख्य उपाधि विजेताले आफ्नो नाम घोषणा हुनासाथ खुसीका आँसु झार्ने परम्परा नै बसेको थियो । उक्त परम्परा विपरीत निकिता गम्भिर देखिनुका साथै मीठो मुस्कानका साथ दर्शकदीर्घातर्फ नियालिरहेकी थिइन् । साप्ताहिकसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा निकिताले त्यतिबेला आफू आफ्ना परिवारका सदस्यलाई खोजिरहेको समेत बताइन् । ‘प्रतियोगिता अवधिभर उहाँहरू पछाडि हुनुहुन्थ्यो,’ निकिताले भनिन्— ‘विजेताका रूपमा मेरो नाम घोषणा हुँदा मैले उहाँहरूलाई पछाडि खोजिरहेँ, तर उहाँहरू त स्टेज नजिकै आइसक्नुभएको रहेछ ।’ निकिताका अनुसार उनको उत्साह बढाउन उनका बुवा, आमा, काका, काकी, भाइ तथा दिदीहरू उक्त फाइनल समारोहमा उपस्थित थिए । निकिताकी आमा गृहिणी हुन् भने बुवा उर्लाबारीमै फुटवेयरको व्यवसाय गर्छन् ।
आफ्नो आत्मविश्वासकै कारण आफू मिस नेपालको उपाधि जित्न सफल भएको निकिताको भनाइ छ । मिस नेपालको ग्रान्ड फिनालेको पहिलो स्क्विेन्सदेखि नै निकितामा विशेष प्रकारको आत्मविश्वास देखिन्थ्यो । अन्नपूर्ण होटलमा सम्पन्न प्रतियोगितामा विजेता भएलगत्तै निकितालाई अघिल्लो वर्षकी मिस नेपाल वल्र्ड अस्मि श्रेष्ठले आफ्नो शिरको मुकुटलाई एकपटक चुम्दै निकिताको शिरमा पहिर्‍याइदिएकी थिइन् । उपाधिसहित निकिताले नगद एक लाख रुपैयाँका साथमा मिस कन्फिडेन्ट र पब्लिक च्वाइस एवार्ड समेत प्राप्त गरिन् । प्रतियोगिताको प्रशिक्षणका क्रममा माइती नेपालको भ्रमणमा रहँदा निकिताले यदि आफू मिस नेपाल भए पुरस्कारस्वरूप प्राप्त रकमको ५० प्रतिशत माइती नेपाललाई प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेकी थिइन् ।
यसअघि परिचयात्मक चरणबाट प्रारम्भ भएको प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा १९ प्रतियोगीमध्ये उत्कृष्ट १४ छनौट गरिएको थियो । उत्कृष्ट सातमा पर्न सफल प्रतिस्पर्धीबाहेक उत्कृष्ट १४ मा रिंकु बज्राचार्य, रोजिना श्रेष्ठ, एरुषा अधिकारी, वर्षा पोखरेल, रक्षा कार्की, प्रियंका खड्का, अनुशा लम्साल, आसिना बराल तथा नर्मता गुरुङले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
परिचयात्मक चरणमा टाइट पाइन्टका साथमा आकर्षक टप्समा प्रस्तुत भएका १९ जना प्रतिस्पर्धीको परिचय दिने शैली आकर्षक रह्यो । त्यसक्रममा उनीहरूले आफ्नो नाम, उमेर तथा स्थानको बारेमा जानकारी गराएका थिए । दोस्रो सिक्वेन्समा उनीहरू गोल्डेन कलरको वन पिसमा प्रस्तुत भएका थिए । यही सिक्वेन्सको अन्त्यमा उत्कृष्ट १४ छनौट गरिएको थियो ।
प्रतियोगिताका क्रममा पूर्व मिस नेपालहरू अस्मि श्रेष्ठ, इभाना मानन्धर तथा सुविन लिम्बूले आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाका बारेमा अडियो–भिज्युअल प्रस्तुत गरेका थिए भने अस्मिले पछिल्लो वर्ष मिस नेपालका रूपमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू सुनाएकी थिइन् ।
प्रकाशित :जेष्ठ २६, २०७४